एन्फाद्वारा चार खेलाडीमाथि कडा कारवाही! | Hamro Khelkud
एन्फाद्वारा चार खेलाडीमाथि कडा कारवाही!
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले गत महिना अनुशासनको उल्लंघन गरेको कारण निलम्बनमा राखेको ४ खेलाडीलाई कडा कारवाही गरेको छ ।
एन्फाले विमल घर्तिमगर र दिनेश राजवंशीलाई ९० दिन निलम्बन गरेको छ भने अन्जन विष्ट र सन्तोष तामाङलाई ४५ दिने निलम्बन कारवाही गरेको हो । कारवाहीको मिति आजको दिनदेखि लागु हुनेछ । सबै खेलाडीले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यससँगै अन्जन र सन्तोषले अब लिगको सुरुवाती डेढ महिनाको खेलमा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । अन्जन लिग च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दीका प्रमुख खेलाडी हुन् भने सन्तोषले आर्मीको मिडफिल्ड सम्हाल्दै आएका छन् । दुवै खेलाडीले लिगको अन्तिम ४ खेल मात्र खेल्न पाउनेछन् ।
दिनेशले भने अझै ३ महिना लिगको खेलमा सहभागी हुने छैनन् । यसको मतलब दीनेशले लिगका सम्पूर्ण खेलहरु गुमाउने भएका छन् । उनले यसै सिजन मात्र थ्री स्टार छोडेर च्यासलसँग अनुबन्धन गरेका थिए । उनले यसै महिना सम्पन्न चन्द्रागिरी गोल्डकप पनि खेलेका थिए ।
विमलको हकमा भने उनी माल्दिभ्सको लिग खेलिरहेका कारण एन्फा अन्तर्गत प्रतियोगितामा मात्र कारवाही हुनेछ । यसबीचमा राष्ट्रिय टोली अथवा अन्य कुनै प्रतियोगिता भएको खण्डमा विमल सहभागी हुने छैनन् । विमलले पछिल्लो समय माल्दिभ्सको शीर्ष डिभिजनको क्लब टीसी स्पोर्ट्सबाट खेल्दै आएका छन् ।
*यसअघि एन्फाले आफ्नो आधिकारी वेबसाइटमा घटना भएको मितिदेखि कारवाही लागु हुने भनेपनि निर्णय परिवर्तन गर्दै आजको मितिदेखि कारवाही दिन गणना हुने जनाएको छ ।*